Idi Ụlọ ọrụ China AHR Slurry Pump Parts ụlọ ọrụ na ndị na-ebubata ya |Arex
Slurry mgbapụta impeller nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa n'ọrụ mgbapụta slurry.Site n'ịtụgharị, ọ nwere ike inyere mgbapụta slurry gboo mkpa nke akụrụngwa.The slurry mgbapụta impeller dị mfe ike gwụrụ, ya mere, anyị na-achọ ihe ndị pụrụ iche na-agbatị ndụ nke impeller.
A na-eji ihe mgbapụta rọba slurry slurry na-emeso slurry na-emebi emebi na ụmụ irighiri ihe.Emere ha nke rọba eke, rọba sịntetịt, rọba EPDM, rọba nitrile, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dịka ịchọrọ.
Anyị ji mpako na-arụpụta mma roba slurry mgbapụta impellers na ndị ọzọ nnọchi akụkụ maka ụfọdụ ama ama mgbapụta manufactures, nke bụ 100% tụgharịa.
Akụkụ mmiri rọba dị ukwuu na-eguzogide iyi na nguzogide corrosion, nke a na-ejikarị eme ihe maka ọnọdụ ọrụ acid.Dị ka ọdụ ọdụ na ụlọ ọrụ Ngwuputa, slurry nwere obere irighiri ihe na enweghị akụkụ siri ike.Akụkụ nchụpụ ahụ niile gụnyere mkpuchi mkpuchi Plate Liner, Akpịrị nkụ, ahịhịa ahịhịa, Frame Plate Liner Insert.
The roba ihe anyị ji nwere elu iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ezi urughuru slurry ngwa.A na-emeziwanye ihe ndị na-eme ka antioxidants na ndị na-emebi ihe na-eme ihe n'ime ihe anyị iji meziwanye ndụ nchekwa ma belata mmebi n'oge eji.A na-enye nkwụsi ike dị elu site na nchikota nke nkwụsi ike ya dị elu, ike dị elu na ike ike dị ala.
Rubber Pump Liners - A na-akụchi ndị na-eme ihe n'ụzọ dị mfe, ọ bụghị nke ọma, na mkpuchi maka ntinye dị mma na ịdị mfe nke mmezi.Ihe mkpuchi ọla siri ike na-agbanwe kpamkpam yana elastomers kpụrụ nrụgide.Elastomer akara na-alaghachi azụ nkwonkwo niile liner.
Koodu Aha ihe Ụdị Nkọwa
YR26 Mgbochi okpomọkụRubber mebiri emebi Rubber eke YR26 bụ rọba okike ojii, dị nro.Ọ nwere elu ozize iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ezi urughuru slurry ngwa.A na-emezi ihe ndị na-eme ka antioxidants na ndanda na-eme ihe na RU26 iji meziwanye ndụ nchekwa ma belata mmebi n'oge eji.A na-enye nkwụsi ike dị elu nke RU26 site na nchikota nke nkwụsi ike ya dị elu, ike dị elu na ike siri ike nke Shore dị ala.
YR33 Rubber eke(dị nro) Rubber eke YR33 bụ ọkwa dị elu nke rọba eke ojii nke siri ike dị ala ma na-eji ya maka cyclone na pump liners na impellers ebe akụrụngwa anụ ahụ ya dị elu na-enye ụbara ibelata iguzogide ike, nkọ slurries.
YR55 Mgbochi okpomọkụRubber eke Rubber eke YR55 bụ rọba eke na-emebi emebi nke ojii.Ọ nwere elu ozize iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ezi urughuru slurry ngwa.
YS01 EPDM rọba Elastomer sịntetik
YS12 Nitrile Rubber Elastomer sịntetik Elastomer YS12 bụ rọba sịntetịt nke a na-ejikarị na ngwa metụtara abụba, mmanụ na waxes.S12 nwere oke mgbochi mbuze.
YS31 ChlorosulfonatedPolyethylene (Hypalon) Elastomer sịntetik YS31 bụ elastomer oxidation na okpomọkụ na-eguzogide.Ọ nwere ezigbo nguzozi nke nguzogide kemịkalụ ma acid na hydrocarbons.
YS42 Polychloroprene (Neoprene) Elastomer sịntetik Polychloroprene (Neoprene) bụ ike dị elu nke sịntetik elastomer nwere ihe na-agbanwe agbanwe na-adị ntakịrị ala karịa rọba eke.Okpomọkụ anaghị emetụta ya karịa rọba eke, ma nwee oke ihu igwe na nguzogide ozone.Ọ na-egosipụtakwa oke mmanu mmanu.
Mgbanaka Pump Expeller Slurry
Slurry Pump Expeller Ring na-eji maka AH / HH / L / M slurry nfuli, The expeller mgbanaka na-arụkọ ọrụ na expeller maka slurry nfuli.Ha nwere ike ọ bụghị naanị nyere aka mechie mgbapụta ahụ, kamakwa belata ike centrifugal.Nhazi na ihe onwunwe nke expeller dị ịrịba ama na ndụ ọrụ ya Akara a dabara maka ọtụtụ ngwa mgbapụta slurry.Ọ na-enye nnukwu uru na ọ dịghị mmiri gland a chọrọ.Onye na-achụpụ ihe na-agba ọsọ na mgbanaka nke otu ihe ma na-arụ ọrụ na vanes na ihu azụ nke agụba ahụ na-eme ka akara ngosi na-agbapụta.Gland nwere mmanu mmanu nke nwere olu na mgbanaka oriọna na-agbapụta mgbe mgbapụta ahụ kwụsịrị.Isi ntinye ntinye na-emetụta ịdị irè nke akara nchụpụ na n'okpuru ọnọdụ ọrụ nkịtị ụdị akara a bụ ihe akaebe zuru oke.
Anyị nwere ike ịnye mgbanaka Expeller nke ihe rọba dị iche iche maka ngwa gị na gburugburu mgbagwoju anya.
Mgbanaka Pump Expeller Slurry AH Slurry nfuli Akụrụngwa
B029 1.5/1B-AH, 2/1.5B-AH chrome dị elu, rọba
C029 3/2C-AH chrome dị elu, rọba
D029 4/3C-AH, 4/3D-AH chrome dị elu, rọba
DAM029 6/4D-AH chrome dị elu, rọba
E029 6/4E-AH chrome dị elu, rọba
EAM029 8/6E-AH, 8/6R-AH chrome dị elu, rọba
F029 8/6F-AH chrome dị elu, rọba
FAM029 10/8F-AH, 12/10F-AH, 14/12F-AH chrome dị elu, rọba
SH029 10/8ST-AH, 12/10ST-AH, 14/12ST-AH chrome dị elu, rọba
TH029 16/14 TU-AH chrome dị elu, rọba
Mgbanaka Pump Expeller Slurry HH Slurry nfuli Akụrụngwa
CH029 1.5/1C-HH chrome dị elu, rọba
DAM029 3/2D-HH chrome dị elu, rọba
EAM029 4/3E-HH chrome dị elu, rọba
FH029 6/4F-HH chrome dị elu, rọba
Mgbanaka Pump Expeller Slurry M Slurry nfuli Akụrụngwa
EAM029 10/8E-M chrome dị elu, rọba
FAM029 10/8F-M chrome dị elu, rọba
Mgbanaka mgbanaka Pump Expeller G(H) nfuli gravel Akụrụngwa
DAM029 6/4D-G chrome dị elu, rọba
E029 8/6E-G chrome dị elu, rọba
F029 10/8F-G chrome dị elu, rọba
GG029 12/10G-G, 14/12G-G, 12/10G-GH chrome dị elu, rọba
HG029 14/12TU-G,16/14TU-G,16/14TU-GH chrome dị elu, rọba
Slurry mgbapụta akpịrị ohia bụ otu n'ime mmiri akụkụ ke kehoraizin slurry mgbapụta nke na-eduzi slurries ka impeller, ọ bụ mmiri n'akụkụ liner nke ejikọrọ na cover efere.
Osisi akpịrị na-adịkarị na nfuli buru ibu, n'ihi na akpịrị akpịrị na ụda olu na-abụkarị otu akụkụ siri ike na obere nfuli.Nhazi nke slurry pump akpịrị ohia dabere na ọnụ ahịa dị irè n'ichepụta na ịrụ ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ na ndị na-ere ahịa na-eji okwu 'throatbush' na-agbanwe agbanwe na 'akpịrị ohia', ọ bụ mkpope ọzọ na-anabatakarị.
Slurry mgbapụta akpịrị bushes na-ejikarị eme na elu chrome alloy ma ọ bụ eke roba, pụrụ iche ihe na-dịnụ.
AHR PuMP OEM Ihe onwunwe
Nke gara aga: Ute rọba Maka ahụ a na-ekpofu ụgbọ ala 副本
Osote: Akụkụ CVX Hydrocyclone
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Valve Control Pneumatic Njikọ Mgbasawanye Seismic Njikọ Mgbasa Ọla Ntupu ihuenyo Valve mmanụ ihe mmịfe Ngwaahịa niile